Zvirwere Zvisingatapuriranwi Zvopedza Vanhu Munyika
Mbudzi 22, 2010
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti vanhu vanosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, vanorara ne high blood pressure muZimbabwe
Nyanzvi munyaya dzezve hutano dzinoti zvirwere zvakaita sezveshuga, kana kuti diabetes, asima, high blood pressure, gomarara, nemoyo, zviri kuwanda muvanhu nepamusana pekushaya ruzivo rwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvakadai.
Vanhu vakawanda vanonzi vari kutambudzika nezvirwere zvakadai, vamwe vachisvika mukufa vari murima vasingazive kuti chii chatora hupenyu hwawo.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti vanhu vemuZimbabwe vanonetsekana ne high blood pressure vanosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, ukuwo vanobatikana neshuga, vanosvika zvikamu gumi kubva muzana.
Vanorarama ne HIV/Aids vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana.
Kuti izvi zvigadzirisike, nyanzvi dzezvehutano dzinoti hurumende, iyo isiri kuisa mari nenguva yakakwana muzvirongwa zvakanangana nezvirwere izvi, inofanirwa kuchinja maitiro ayo.
Masangano anopa mari anonzi ari kuisa mari zhinji muzvirongwa zvakanangana neHIV/AIDS, malaria neTB, zvinova zvirwere zvinotapuriranwa.
Nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Elopy Sibanda, avo vanoshanda sachipangamazano pa Parirenyatwa Hospital, vanoti vanorwadziwa zvikuru nekuparara kuri kuita vanhu nezvirwere zvisingatapuriranwe, asi zvichigona kudzivirirwa nyore nyore.
Va Sibanda vanoti hurumende, ichibatsirwa nemasangano anopa mari, inofanira kuita zvese zvainogona kuitira kuti iise mari muzvirongwa zvekudzivirira zvirwere zvisingatapuriranwi.
Mumwe mukoti, Anna Mujaka, anoti dambudziko rechirwere cheshuga nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwi, rakura zvikuru munyika zvekuti vana mukoti navana chiremba vari kutadza kurwisa zvirwere izvi.
Gurukota rezvehutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Dr Henry Madzorera, vanoti ivo nevamwe vavo makurukota ehutano vakatowona kare kuti dambudziko rezvirwere izvi, rakurisa zvekuti vakatoparura chirongwa chichaitwa munyika dzese dzemu SADC chekudzivirira kufa kwevanhu kana kurwara kusina tsarukano.
Va Madzorera vanoti hurumende ichaedza zvese zvainogona kuita pamusoro pezvirwere izvi nekuti pari zvino zvava kudya mari zhinji yehutano munyika.
Kukura kuri kuita zvirwere izvi muAfrica yose kwapa kuti sangano re Commonwealth riite musangano mukuru gore rinouya wemakurukota ezvehutano munyika dzichiri kubudirira, kuitira kuti vakurukure pamwe nekupana mazano pamusoro pedambudziko rezvirwere izvi, iro rinonzi rasvika pakaipisisa zvikuru.